Shiinnada iyo soosaarayaasha soosaareyaasha Shiinaha i taxadarka Nagala'aanta ah Micomme
faahfaahinta badeecada imgs
AST (Teknolojiyad isku-xirnaan otomaatig ah)
Si otomaatig ah u raacso neefsashada bukaanka, si sax ah u go'aamiya waqtiga bukaanka kiciya iyo beddelaadda, oo waxaad siisaa dhiirrigelinta u dhigma iyo cadaadiska qulqula; tikniyoolajiyadda tooska ah ee dareenka adigoon gacantu dejin dareenka, yaree shaqada neefsashada bukaanka.
Tikniyoolajiyadda tooska ah ee korantada
Soosaarista algorithm cusub oo saynis ah, si toos ah u hagaajiya cadaadiska, soo ogaada oo ka jawaab dhacdooyinka neefsashada ee kala duwan
Tikniyoolajiyadda xakamaynta cadaadiska otomatiga ah ayaa si otomaatig ah u sax ah ula socon kara oo u aqoonsan kara 6 nooc oo dhacdooyinka neefsashada ah sida hypopnea, xannibaadda xaddidan, xaddididda socodka hawada, hoos udhaca joogtada ah, liigitaanka weyn iyo finanka bartamaha oo ka jawaaba afarta qaybood ee ugu horreeya isla markiiba. Sida hawo yaraanta, xannuunka xanibaadda, socodka hawada oo xaddidan, quus joogto ah.
Tiknoolajiyadda sii-deynta cadaadiska ee COMF
Awoodda tikniyoolajiyada ee culeyska culeyska-COMF, waa awood noo gaar ah
Waxay hubin kartaa heerka raaxada, u hogaansanaanta sare, ka xor ah kalkaalinta culeyska culeyska iyada oo loo marayo baaritaanka caafimaad iyo banaanbax.
Habka Auto CPAP
Marka loo eego xirmidda marin-haweedka, cadaadiska ugu fiican ee hawo-mareenka wanaagsan ee tooska ah ayaa si otomaatik ah loo siiyaa inta u dhexeysa IPAP ee ugu hooseeya iyo kan ugu sarreeya ee 'IPAP', furitaanka marin-haweedka iyadoo la hagaajinayo raaxada bukaanka.
Qaabka Auto Bi-heer
Marka loo eego xirmidda marin-haweedka, waxay si otomaatig ah u siisaa cadaadis heer sare ah oo heerkiisu sarreeyo oo u dhexeeya baaxadda IPAP iyo EPA, furitaanka marin-haweedka iyadoo la hagaajinayo raaxada bukaanka.
Mashiinka neefsashada wuxuu siinayaa isla cadaadis labada weji ee dhiirrigelinta iyo marxaladda qulqulka, isagoo ka caawinaya bukaanka inuu furo marin-haweedka.
IPAP iyo EPAP ayaa loo dejin karaa si gooni ah waxayna bixin karaan cadaadis laba-weji ah oo ka caawinaya bukaanka inay furaan marin-haweedka oo ay si habsami leh u neefsadaan.
.2 0.2cm H2O
0 illaa 45 daqiiqo （5-daqiiqo oo koror ah
Gargaarka cadaadiska ee COMF
1-5 heerarka （113 ilaa 185 ℉ 23 illaa 85 ℃）
Habeen kala jiid
Awoodda kaydinta xogta
Heerka codka micnahiisa